नेपाल आज केन्यासँग भिड्दै - विवेचना
नेपाल आज केन्यासँग भिड्दै
February 12, 2018 294 Views
काठमाडौं । नामिबियामा जारी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ अन्तरगत आज नेपालले केन्यासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो १:१५ बजे सुरु हुनेछ।
पहिलो खेलमा नामिबियामाथि १ विकेटको जित निकालेको नेपाल दोस्रो खेलमा ओमानसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा आइतबार बलियो प्रतिद्वन्द्वी मानिएको यूएईलाई चार विकेटले पराजित गर्‍यो। आज अर्को बलियो प्रतिद्वन्द्वी केन्यासँग भिड्न लागेको हो।
३ खेलबाट ४ अंक बनाएको नेपाल अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। ३ खेल जितेको क्यानडा ६ अंसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। यसअघिका दुवै खेल हारेको केन्या भने अंकविहीन रहँदै अंक तलिकाको पुच्छारमा छ। नेपाललाई विश्वकप छनोटमा स्थान पक्का गर्नका लागि आजको केन्यासँगको खेल जित्नै पर्ने देखिन्छ।
यस प्रतियोगितको शीर्ष स्थानमा रहने दुई टोली २०१९ को विश्वकपका लागि आगामी मार्चमा जिम्बाब्वेमा हुने अन्तिम चरणको छनोट प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छन् ।
Previous वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी जाहाँगिरको निधन
Next ओली-प्रचण्ड वार्ता जारी : एकताबारे निस्केला त निष्कर्ष ?
खादा विवादमा मुछिएका मेयरले भनेः आई एम सरी !
शिक्षकको कुटाइले छोराको मृत्यु भएको अभिभावकको आरोप, पिट्ने शिक्षक फरार
मण्डपमा बसिरहेकी बेहुलीलाई कुटपिट
a certain colouring of imagination:acertain colouring of imagination [...]we came acrossacool web-site which you...
свинья парнокопытное: свинья парно...
medion akoya p6624 treiber: medion akoya p6624 treiber [...]here are some hyperlinks to web-sites that we li...
временное психическое расстройство: временное пс...
p nk - family portrait перевод: p nk - family portrait перевод [...]al...